[Fiovan'ny hira] Kaonseritra mozika Kojiro Oka 2021 | Fikambanan'ny fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
[Fiovan'ny hira] Kaonseritra mozika Kojiro Oka 2021
[Fiovan'ny hira] Kaonseritra mozika Kojiro Oka 2021 "Best of Musical"
Kojiro Oka, kintana eo amin'ny tontolon'ny mozika Japoney.
Handray vahiny izahay ary hihira vatosoa isa mozika.
Ankafizo azafady ny fotoana mahasambatra rehefa mamo amin'ny feo mihira mahafinaritra.
* Seza iray no hamidy amin'ny fipetrahana mahazatra (tsy ankanavaka ny laharana eo aloha sy ny seza sasantsasany) fa tsy avela seza iray eo alohan, any aoriana, havia sy havanana.
* Mba hisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra dia tsy hamidy ny laharana voalohany sy ny seza sasany.
18:30 manomboka (17:30 misokatra)
"Izay rehetra angatahiko aminao (AL Webber)" avy amin'ny "The Phantom of the Opera"
"Tonight (L. Bernstein)" sy ny hafa avy amin'ny "West Side Story"
* Azo ovaina ny hira.Aza hadino fa.
Vahiny: Hiroko Kouda
Hetsika manokana OKA
Daty famoahana: 2021 aprily 9 (alarobia) 15:10 -
Seza SS 8,500 XNUMX yen
S seza 7,500 yen
Toerana 6,000 yen
Seza B 4,500 yen
C seza 3,000 yen
Kojiro Oka (mpilalao mozika, mpamokatra)
Teraka tao amin'ny prefektioran'i Fukuoka.Miorina amin'ny teny sinoa any amin'ny oniversite.Taty aoriana dia nandray anjara tamin'ny orinasa Shiki Theatre izy tamin'ny naha mpikambana azy tao amin'ny fizaran-taona. Tamin'ny taona 1994 dia nanao audition ny anjara asan'ny Enjolras tao amin'ny "Les Miserables" izy ary nandroso haingana ho tonga kintana mozika iray miaraka amin'ny bika aman'endriny kanto sy ny fahaizany mihira mihoampampana. Nanomboka ny taona 2003 dia nitana ny toeran'i Javert tamin'io sanganasa io ihany izy ary nandray anjara tamin'ny "Les Miserables" nandritra ny 17 taona.Ankoatry ny mozika dia manao filalaovana mahery vaika koa izy amin'ny fahitalavitra (tantara an-tsary NHK Taiga "Yoshitsune", sns.), Onjam-peo, kaonseritra hatramin'ny orkestra feno hatramin'ny trano mivantana ary seho resaka. Ny CD dia namoaka ny "Love Collection", "The Prayer" ary "Best of Musical" ho rakikira solo.Ankoatr'izay, nanararaotra ny Miss Saigon dia nandefa ny "Miss Saigon Fund" ary koa mazoto amin'ny hetsika mpilatsaka an-tsitrapo.Profesora mitsidika ao amin'ny Kyushu Otani Junior College.
Nahazo diplaoma tamin'ny University of the Arts ao Tokyo.Rehefa avy niasa tao amin'ny sekoly nahazo diplaoma sy ny Opera Training Institute an'ny Agence for Cultural Affairs dia nifindra tany Italia.Taorian'ny nahazoany laharana ambony tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena maro dia navitrika izy tao amin'ny Roman Opera House, Stuttgart State Theatre, sns., Ary manana fifanarahana manokana miaraka amin'i Vienna Volksoper malaza.Taorian'ny niverenany tany Japon dia nanao fampisehoana tao amin'ny New National Theatre, "The Tales of Hoffmann", "Rokumeikan," Biwako Hall, "Rigoletto," the Nikikai, "The Magic Flute," "Der Rosenkavalier," ary "Puritan. "Ankoatry ny rindran-kira sy ny kaonseran'ny orkesitra manerana ny firenena dia mampivelatra hetsika isan-karazany toa ny toetran'ny NHK-FM "Mozika kilasika araka ny finiavana" sy MC ao amin'ny BS Fuji "Recipe Ann" izy. Amin'ny taona 2018, ho fahatsiarovana ny faha-10 taonan'ny debut CD, "ARIA Hana to Hana-Opera Aria Masterpieces" dia havoaka, ary amin'ny 2020, "Kono Michi-Japanese Song II-" no hivoaka.Nahazo ny Loka Fahatsiarovana Goshima Fahatsiarovana faha-14 tamin'ny Opera New Face Award ary ny loka Exxon Mobile Music 38th Award Western Music Division Encouragement Award.Ny masoivohon'ny fitsangantsanganana faha-3 (masoivoho fampiroboroboana fitsangantsanganana). Voalahatra ho kintana amin'ny fivoriana faharoa "Die Fledermaus" Rosalinde tamin'ny Novambra 2021 ary ny Princess Kaguya ao amin'ny "Taketori Monogatari" ao amin'ny Hall Biwa Hall ny volana Janoary 11.Mpikambana Nikikai.